MACLUUMAADKA NOOCYADA YARYAR EE GOLDENDOODLE DOG IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Noocyada Yaryar ee Goldendoodle Dog iyo Sawirro
Dahab dahab ah / Caruur ama Ey Yar oo Ey ah oo Nooc Isku Daran ah
Bentley Mini Goldendoodle oo ah 6 bilood jir culeyskiisu yahay 45 rodol
Mini Curly Retriever
Hawlgab Yar oo Curly ah
Guntin yar yar
Guntinta yar ee 'Goldendoodle' ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Dahab dahab ah iyo Ciyaaraha, Guntinta yar ama Heerka yar Poodle . Qaar ka mid ah Dahab-gooyeyaasha Ghadafi-yar ayaa loo soo saaraa sidii iskutallaabtii ugu horreysay ee udhaxeysa Dahab-laawe Dahab ah iyo Guntin Guntin Qaar baa leh Toy Goldendoodle dhexdeeda Labadan cabbir ee yar yar ee Goldendoodles waxaa lagu gaaraa mararka qaarkood qalliin qalliin ama abuurid macmal ah, laakiin maahan dhammaan kuwa wax soo saara inay sameeyaan habkan taranka. Eeyaha soo baxay ayaa laga yaabaa ama laga yaabee inay yaryihiin cabir ahaan. Aragtidu waxay tahay inay u dhexeeyaan inta u dhexeysa cabbirka Yaryar ee Poodle iyo cabirka Dahablaha Dahabka ah. Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Weydii bixiyaha aad la xiriirto nooca taranta ay ku soo saari jireen Mini Goldendoodle. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
cagajuglaynta maraykanka iyo bulldog
Waxaa jira dhowr siyaabood oo kala duwan oo ay u soo saaraan Goldendoodles.
F1 = 50% Retriever Dahab ah iyo 50% Poodle: Kani waa Dahab Poodle ka gudub kani waa jiilkii ugu horeeyay, taasoo dhalisa faracyo caafimaad qaba. Nooca timuhu wuxuu noqon karaa mid jilicsan sida Dahabka ama wavy / shaggy ama mararka qaarkood wiry sida Irish wolfhound (laakiin leh jilicsanaan jilicsan) way daadin karaan ama ma daadin karaan arday isku qashin ah way kala duwanaan karaan.
F1-B = 25% Hawlgab Dahab ah iyo 75% Poodle (F1 Goldendoodle iyo Poodle iskutallaab): Kani waa Goldendoodle oo dib loogu soo celiyey Poodle.
F2 = F1 Goldendoodle iyo F1 Goldendoodle iskutallaab: Isku daridan waxaad kaheleysaa boqolkiiba isku mid ah isku dhafka 'Golden Poodle' sida aad u heli laheyd F1 Goldendoodle.
F3 = F2 Goldendoodle iyo F2 Goldendoodle iskutallaabta.
Jiil badan = F3 ama jiil ka sareeya Goldendoodle iyo F3 ama jiil ka sareeya Goldendoodle iskutallaabta.
GANA = Ururka Goldendoodle ee Waqooyiga Ameerika
TGR = Diiwaanka Goldendoodle
Macluumaadka Petite Goldendoodle
Macluumaadka Goldendoodle ee caadiga ah
Otis F1 Mini Goldendoodle— 'Tani waa Otis barafkiisii ​​ugu horreeyay (wuu jeclaa!). Waa 9.5 bilood jir miisaankiisuna waa 36 rodol sawirkan. Wali si xirfad leh looma carbin, laakiin jaakadiisa shagaga waa dayactir aad u hooseeya (waxaana u maleyneynaa inay tahay wax aad u qurux badan ...). Lahaanshaha sawirka Dreamdoodles
Otis F1 Mini Goldendoodle markay tahay 9½ bilood jir, waxaa iska leh sharraxaadda Dreamdoodles
Otis F1 Mini Goldendoodle oo 5 bilood jir ah— 'Hooyadiis waxay ahayd Dhajiye Dahab ah, aabihiisna wuxuu ahaa Poodle khudaar yar. Isagu waa eey cajaa’ib leh, waa qof kalgacal badan oo caqli badan aadna u fudud in la tababaro. Otis waa mid saaxiibtinimo aad u wanaagsan leh dadka iyo eeyaha, wuuna ku qanci karaa qof walba qaabkiisa wanaagsan. Mana daadinayo! Waxaan u maleyneynaa inuu ku dhamaan doono ilaa 35-40 rodol markii uu si buuxda u weynaado. Sawir Lahaanshaha Dreamdoodles
Otis oo ah F1 Mini Goldendoodle oo 5 bilood jira (Hooyo Dahab Ah oo Dahab ah / Aabbe pepper aabbe Poodle), waxaa iska leh sharraxaadda Dreamdoodles
sawirrada eeyaha yaryar ee loo yaqaan 'poodle puppy'
Otis ee F1 Mini Goldendoodle eey ah oo 10 toddobaad jir ah (Hooyo Dahab ah oo Dahab ah / Aabbeetho yar oo Poodle aabbe ah), waxaa iska leh sharraxaadda Dreamdoodles
'Kani waa eeygii Maggie May ee qiyaastii 8 toddobaad ah. Iyadu waa Gabar yar oo Gendendoodle ah F1. Aabbe wuxuu ahaa Mini Poodle hooyadiina waxay ahayd a Dahab dahab ah . Dhego yaab leh bay leedahay. Dhegteeda bidix weligeed si sax ah ugama ay korin, laakiin si fiican ayey wax uga maqli kartaa. Kaliya kuma filna in la rogo sida dhagteeda midig u eg tahay. '
Kani waa Maverick, Mini Goldendoodle-keena ayaa ku jiifa sariirtiisa sariirta.
Sully eeyaha yar yar ee 'Mini Goldendoodle' oo jira 2½ bilood jir, culeyskiisuna yahay 10 rodol
8-toddobaad jir ah ee yar yar ee 'Gold Goldoodoodle', sawir qadarin leh Ayers Pampered Pets
Liistada Toy Poodle Mix Digaag Cunto
Liistada eeyaha Yaryar ee Poodle Mix
Liistada Eeyaha Dahabka Ah ee Isku-dhafka Ah
Liiska eeyaha isku dhafan ee 'Goldendoodle Mix'
muxuu shaybaar qalin ah u egyahay
Feedhyahan iyo adhijirka reer Jarmal eey isku dhex qasan eeyo
shukulaatada shaaha shukulaatada basset hound mix
adhijir Jarmal doberman Pinchercher mix
chihuahua Jack Russell cross Pit